टेलिकम बेच्दै कम्युनिष्ट सरकार, अर्बौ कमिसन खाने गोकुल बाँस्कोटाको दाउ ! - Sidha News
टेलिकम बेच्दै कम्युनिष्ट सरकार, अर्बौ कमिसन खाने गोकुल बाँस्कोटाको दाउ !
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको बहुमत शेयर विदेशी कम्पनीलाई दिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दवाब दिएको खुलासा भएको छ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नाफामा रहेको सरकारको बहुमत शेयर भएको कम्पनीलाई विदेशीको हातमा सुम्पन लागेका हुन् । मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार ५१ प्रतिशत शेयर विदेशी कम्पनीको हातमा दिन नेपाल टेलिकममा दवाव बढाएका छन् । विगतमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव विपरित मन्त्रीले अर्बौं कमिसनको लोभमा विदेशी कम्पनीलाई टेलिकम दिन लागेको स्रोतको दावी छ।
मन्त्री बाँस्कोटाले विना प्रतिस्प्रर्धा सोझै जापानको निजी टेलिकम कम्पनी केडीआईलाई बहुमत शेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । जापानी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्र्याएर बहुमत शेयर दिन लागिएको हो।
नेपाल टेलिकमको बहुमत शेयर पाएमा आफू साझेदारीका लागि इच्छुक भन्दै जापानी टेलिकम कम्पनीले केही समय अघि प्रस्ताव गरेको थियो । जब कि टेलिकमले यस अघि व्यवसायिक साझेदारका लागि नियुक्त गरेको परामर्शदाता कम्पनीले भने २० देखि ३० प्रतिशतसम्म शेयर मात्र बेच्न सकिने सुझाव दिएको थियो । तर मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमको हित विपरित जापानी कम्पनीलाई सुम्पन दवाव दिएका छन्।
जापानी कम्पनी केडीडीआईको प्रस्ताव आफ्नो लागि अव्यवहारिक रहेको भन्दै टेलिकमले भने असहमति जनाउँदै आएको छ । तर मन्त्री बाँस्कोटाले भने टेलिकमका कुरा लत्याउँदै दवाब सिर्जना गरेका छन्।
जापानको निजी कम्पनी भएकोले हाम्रो सरकारी कम्पनीलाई सिधै अन्य देशको निजी कम्पनीलाई दिन पाउने कानुनी प्रावधान समेत रहेको छैन । ‘उक्त कम्पनी जापानको निजी टेलिकम कम्पनी हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रोमा निजी कम्पनीलाई सिधै सरकारी कम्पनीको शेयर दिनसकिने कानुन पनि छैन । सरकार–सरकार (जी टू जी) को अवस्था हुन्थो भने अर्कै विषय हुन्थ्यो ।’ अर्कोतर्फ उक्त जापानी कम्पनीलाई साझेदारको रुपमा ल्याउँदा दुई कम्पनीबिच शेयर बाँडफाँड कसरि गर्ने, लगानी कसरी गर्ने, काम कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषय समेत स्पष्ट छैन् । तर मन्त्री बाँस्कोटाले भने कमिसनको लोभमा जवरजस्ती प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन्।
विदेशी कम्पनीको रुपमा लगानी गरेर आउँदा उसले यहाँ कामगर्ने वातावरण भिन्न हुन आवश्यक रहेको टेलिकम स्रोतको भनाइ छ । ‘हालको सरकारको सार्वजनिक खरिद ए‍ेनमा रहेर उसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यस्ता घेरै विषय छन,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘जसले साझेदारीको लागि समस्या श्रृजना गरिदिएको छ । उक्त कम्पनीले म्यानमारमा आफुले बहुमत शेयर लिएर साझेदारीको रुपमा काम गरेको भन्दै आएको छ । तर, नेपालको परिवेशमा त्यो सम्भव पनि छैन्।’
यसअघि टेलिकमले साझेदार भित्र्याउन टेण्डर डकुमन्ट बनाउने, कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका विषयको लागि बेलायतको एनालिसिस प्यासन कम्पनीलाई कन्सल्ट्यान्स नियुक्त गरेको थियो । उक्त कम्पनीले त्यसको अध्ययन गरि प्रतिवेदन समेत बुझाई सकेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा कुनै पनि कम्पनीलाई साँझेदारको रुपमा ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्दा बढि शेयर दिन नसकिने सुझाव दिएको थियो।
तर मन्त्री सहित नेकपा पार्टीनै यतिवेला जापानी कम्पनीलाई टेलिकम सुम्पेर अबौं रुपैयाँ कमिसना खाने दाउमा लागेका छन् । सधै नाफामा राम्रो कमाइ रहेको सरकारी कम्पनीलाई निजी विदेशी कम्पनीको पोल्टामा पु¥याउन लागिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल सम्म यो विषयमा कुरा गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ।
(मिडिया डबलीबाट साभार गरिएको)